हैकमवादमा चलेको बिजुली अड्डा र आजको भद्रगोल - UrjaKhabar हैकमवादमा चलेको बिजुली अड्डा र आजको भद्रगोल - UrjaKhabar
काठमाडौं । गएको साता निरन्तर झरी पर्यो । सायद, यो वर्षकै लामो झरी थियो । निरन्तर पानी पर्ना साथ विद्युत् आपूर्तिमा गडबड हुन थाल्यो । एकैछिनमा बिजुली आउने जाने वा निरन्तर २–३ घन्टा काटिन भइरह्यो ।
उपत्यकाका केही ठाउँमा १०–१२ घन्टा बिजुली काटिएको खबर सामाजिक सञ्जालमा छ्याप्छ्याप्ती आउन थाले । करिब ४–५ दिन निरन्तर पानी पर्दा देशैभरि यही अवस्था रहेको विभिन्न क्षेत्रबाट गुनासो सुनिन थाल्यो । सामाजिक सञ्जालमा त विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङको बहिर्गमनपछि पुनः लोडसेडिङ हुन थालेको आशंका व्यक्त हुन थाल्यो ।
कतिपयले ‘अब लोडसेडिङ सुरु हुन्छ, सबैले इन्भर्टरको जोहो गर्नु’ भन्ने खालका सन्देश प्रवाह गरे । सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले आफूले इन्भर्टर जडान गरेको फोटो समेत पोस्ट गरे । एक प्रकारले उनले विभिन्न ठाउँको फोटो र बिजुली काटिएको लेख्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई उद्देलित बनाएको देखियो ।
सामाजिक सञ्जाल वा विभिन्न माध्यमबाट लोडसेडिङबारे चिन्ता व्यक्त हुनु स्वभाविक हो । पछिल्लो समय देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा भइसकेको छ । यसो हुँदा सर्वसाधारणले अब यसको नामसमेत सुन्न चाहिरहेका छैनन् । पछिल्लो चार वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्वमा घिसिङ रहेकाले उनले लोडसेडिङ अन्त्यको जस पाइरहेका छन् ।
कार्यकाल सकेर बाहिरिएपछि घिसिङको अनुपस्थितिमा ‘फेरि लोडसेडिङ हुन्छ’ भन्दै हल्ला फैलाइएको छ । जुन अब सत्य हुन सक्दैन । र, हुनु हुँदैन । केही अनलाइन पत्रिकामा इन्भर्टरको व्यापार बढेको समाचार पनि आइरहेको छ । यसरी, सर्वसाधारणलाई आतंकित पार्न थालेपछि हिजो अँध्यारोको व्यापार गर्नेहरू सल्बलाउन थाल्नेछन् ।
निरन्तर पानी वा झरी पर्दा बिजुली किन जान्छ ? हावाहुरी चल्दा किन काटिन्छ भन्ने विषयलाई शिक्षित बर्गले ससर्ती भए पनि मनन् गर्न जरुरी छ । यसका केही रहस्य खोज्न र नबुझ्ने व्यक्ति वा समूहलाई बुझाउने प्रयास गर्नुपर्छ । जुन शिक्षित व्यक्तिको दायित्व पनि हो ।
वास्तविकाता बुझौं : हाम्रो विद्युत् वितरण प्रणाली स्वस्थ छैन । पछिल्ला ४ वर्षमा पनि वितरण प्रणाली सुधार, स्तरोन्नती र निर्माणमा खासै ठूलो काम हुन सकेन । सर्वसाधारणका घरमा निरन्तर २–४ वटा बल्ब बाल्ने ध्यानमा सबै शक्ति केन्द्रित भयो । जहाँ–जहाँ जसरी समस्या आयो त्यहाँ अल्पकालीन समाधान खोजियो । दिगो बनाउनेतर्फ नेतृत्व तहले त्यति ध्यान दिएको पाइएन । सायद समय पनि पर्याप्त थिएन ।
यही कारण निरन्तर झरी पर्दा, चट्याङ पर्दा, हावाहुरी चल्दा वितरण लाइनमा समस्या आउने गर्छ । वितरण लाइन एकआपसमा छोइएर जल्ने, पड्किने वा आगलागी हुने प्राधिकरणकै उच्च अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । निरन्तर पानी परेपछि जमिन भिजेर कतिपय ठाउँमा पोल ढल्ने, ट्रान्सफर्मर पड्किने समस्या पनि देखिन्छ ।
प्रणाली गतिलो नहुनुका कारणले यो समस्या विगतमा पनि थियो । हुन्थ्यो, निरन्तर दोहोरिन्थ्यो । अहिले पनि देखिएको छ । यसको उपाय भनेकै तत्कालका लागि मर्मत गरेर टालटुल पार्ने नै हो । जुन काम घिसिङको कार्यकालमा पनि भइरहेको थियो । जबसम्म वितरण प्रणाली स्वस्थ र गुणस्तरीय हुँदैन तबसम्म पर्याप्त बिजुली भए पनि झरी पर्दा वा हावाहुरी चल्दा बिजुली काटिने समस्या अन्त्य हुँदैन ।
प्रणाली स्वस्थ बनाउन विद्युत् प्रवाह हुने तार, पोल, ट्रान्सफर्मर, इन्सुलेटर लगायत उपकरण गुणस्तरीय जडान गर्नुपर्छ । यसका लागि त्यही अनुसारको योजना, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था हुनु जरुरी छ । कार्यक्षेत्रमा पर्याप्त कामदार हुनुपर्छ । योसँगै तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने नेतृत्व सक्षम र हस्तक्षेपकारी हुन जरुरी छ । अल्पकालीन टालटुले नीतिले यो काम गर्न सम्भव हुँदैन ।
विद्युत्को उपलब्धता जसरी बढ्दै गयो त्यसरी नै वितरण गर्ने प्रणाली तथा लाइन सुधार र स्तरोन्नति गर्दै जानुपर्थ्याे । विगत दशौं वर्षदेखि यो काम हुन सकेन । पछिल्ला ४ वर्षमा पनि घिसिङले सर्वसाधारणको घरमा बल्ब झुण्ड्याउने र बाल्नेतर्फ मात्र बढी जोड दिए ।
अहिले उपत्यकाका केही ठाउँमा वितरण लाइन भूमिगत गर्न प्रक्रिया भइरहेको छ । यो पहिलो गुणस्तरीय कामको प्रयास हो । जुन घिसिङको पालामा सुरु भयो । अब यसरी नै उपत्यकाभित्र र मुख्य सहरको वितरण लाइन सुधार तथा स्तरोन्नती गर्न जरुरी छ । भूमिगत गर्न मिल्ने र सकिने ठाउँमा गर्ने सम्भव नहुने ठाउँमा गुणस्तरीय तार, पोल र ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने प्रक्रियालाई अब द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
यदि, विद्युत् वितरण गर्ने पूर्वाधार मजबुत र गुणस्तरीय बनाउन सकिएन भने काठमाडौं उपत्यकाको अवस्था भयावह हुन सक्छ । हरेक घरमा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने पद्धति बढिरहेको छ । यसले माग बढाउने भइहाल्यो । माग बढ्ना साथ त्यसलाई धान्ने तार, ट्रान्सफर्मर लगायत उच्च क्षमताका उपकरण जडान गर्नुको विकल्प हुँदैन । भएन भने फेरि पनि उपत्यकाबासीले यसरी नै बिजुली काटिने समस्या वा अनियमित लोेडसेडिङ झेलिरहनुपर्छ ।
नियमित लोडसेडिङको हौवा : सामाजिक सञ्जालमा जसरी पुनः नियमित लोडसेडिङ हुने हल्ला फिँजाइएको छ । त्यो सरासर गलत मनोभावना हो । आज हिजोको जस्तो परिस्थिति छैन । देशमा उत्पादित र आयातित गरेर प्रणालीमा पर्याप्त बिजुली उपलब्ध भइसकेको छ । अझ हरेक वर्ष निजी क्षेत्रको उत्पादन थपिइरहेको छ ।
उता ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुने उद्योग कलकारखाना खुलेका छैनन् । त्यसैले, बिजुली कहाँ खपत गर्ने भन्ने समस्या उत्पन्न हुँदैछ । गत वर्षदेखि नै बर्खामा केही हजार युनिट विद्युत् जगेडा भएर भारततर्फ पठाइएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । औपचारिकरूपमा विद्युत् भारत निर्यात गर्ने आधार तयार हुन सकेको छैन ।
२०७० सालमा भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसो हुँदा केही परिमाणको विद्युत् सीमाका ३३ केभी वा १३२ केभी लाइनबाट बगेर गए पनि औपचारिकरूपमा तत्कालै व्यापार हुने सम्भावना कम देखिन्छ । यसैले, देशभित्रै बढीभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
लोडसेडिङ (अभाव) त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला माग बढी र आपूर्ति कम हुन्छ । माग बढी र आपूर्ति कम हुँदा वा वस्तुको अभाव हुँदा बीचमा चलखेल गर्ने बिचौलिया हाबी हुन्छन् । यो बजारको सर्वमान्वय सिद्धान्त पनि हो । यहाँ त मागअनुसार नै आपूर्ति भइसक्यो वा अझ बढी हुने अवस्था सिर्जना हुन गइरहेको छ । यसो हुँदा लोडसेडिङ हुने आशंक गर्नु गलत हो । तालिका निकालेर लोडसेडिङ गर्ने युग करिब समाप्त भएको मान्नुपर्छ ।
बिजुली कतिबेला काटिन्छ त ? माथि उल्लेख गरे जस्तै प्रसारण लाइन वा पूर्वाधार गुणस्तरीय बनाउन सकिएन वा त्यही अनुसार बजेट विनियोजन गरेर योजना कार्यान्व्यन गर्न सकिएन भने अनियमितरूपमा लाइन काटिन्छ । यो भनेको गाग्रीभरि पानी भए पनि सारेर पिउन अंखोरा वा गिलास नभएजस्तै हो । गाग्री नै ढल्काएर पिउन खोज्दा पोखिन्छ, खेर जान्छ । यो भनेको अनियमित विद्युत् कटौती हो ।
प्राधिकरण व्यवस्थापन : २०७२ सालको हिउँदको उच्चतम लोडसेडिङ दैनिक ८ घन्टा थियो । यसपछि विस्तारै कम हुँदै २०७३ को बर्खामा दैनिक २ घन्टामा झर्यो । सोही वर्षको हिउँदमा बढीमा ४ घन्टा र घटीमा २ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । २०७३ भदौ २९ गते सरकारले कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गर्यो ।
तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि उनले पहिलो काम नै लोडसेडिङ हटाउने जिम्मा दिए । शर्माले पूर्ण सहयोग गर्दै घिसिङलाई हौसला दिएपछि केही हस्तक्षेपकारी काम भएका हुन् । हिउँदमा प्रक्षेपण गरिएको २ घन्टा लोडसेडिङ भएन । माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउँदै केही जोखिम लिएको हुँदा हिउँदमा घोषित लोडसेडिङ भएन ।
पछिल्ला ४ वर्षमा घिसिङले माग र आपूर्तिबीचको सन्तुलनलाई सन्तुलित नै राख्न सफल भए । यसको पछाडि सरकार, तत्कालीन मन्त्री र सिंगो प्राधिकरणको टिमको सहयोग रह्यो । अझ घिसिङलाई मिडियामा लोकप्रिय बनाइदिने काम केही उपकार्यकारी निर्देकक तथा निर्देशकले गरे । घिसिङको नेतृत्वमा भए/गरेका वा नमिलेका वा नमिलाइएका काम, कतिपय विवादित विषय र परिणाम निकै सुन्दर ढंगले प्रस्तुत गरियो ।
बोली र प्रस्तुतिमा निकै अब्बल तथा कालीगढी विशेषता भएका केही कर्मचारीले जटिल प्राविधिक तथा विवादित विषयलाई समेत बडो सरल, तर्कशील र परिणाम देखिने गरी प्रस्तुत गर्दै आए । यसो हुँदा मिडियामा घिसिङ चाहिने भन्दा बढी लोकप्रिय बने । घिसिङको सफलताको ठूलो श्रेय ती उपकार्यकारी निर्देशक तथा निर्देशकहरू पनि हुन् भन्दा अन्यथा हुँदैन ।
किनकि, विगतमा प्राधिकरणभित्र कार्यकारी निर्देशकलाई त्यसरी सहयोग गर्ने टिम कमै थियो । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, घिसिङ निस्किएपछि प्राधिकरण लथालिंग जस्तो देखियो । दैनिक कामका लागि समेत ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बाेलाएर यसाे गर र उसाे गर भन्नु पर्दैनथ्याे । यो ४ वर्षमा घिसिङले प्राधिकरणभित्र प्रणाली स्थापित गर्न सक्नुपर्थ्याे । त्यो देखिएन । एउटा व्यक्ति वा नेतृत्व बाहिरिनासाथ सबै कर्मचारी १० तिर फर्केर बस्नु वा काम गर्नुले थिति बस्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।
कार्यकाल सकेर घिसिङ निस्किए । उनको पक्षमा सामाजिक सञ्जालमा आवाज गुञ्जियो । लगत्तै निरन्तर झरी पर्यो । यहीबीच विद्युत् अनियमित भयो । यी सबै चिज एकपछि अर्को हुँदै गए । यही कारण घिसिङलाई देवत्वकरण गर्नेहरू बढ्न थाले । विगतका हाकिमलाई राक्षसीकरण गरियो । फेरि लोडसेडिङको हल्ला चल्यो । प्राधिकरण व्यवस्थापन पनि चारतिर फर्केको देखियो ।
यी गतिविधि हुनुको पछाडि फेरि पनि प्राधिकरणमा प्रणाली बस्न नसकेको उजागर हुन्छ । घिसिङ काममा दलिने व्यक्ति हुन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा दैनिक १४–१५ घन्टा खटिए । यो सत्य जहिले पनि सत्य नै हुन्छ । तर, सक्षम नेतृत्वले आफू लादिनुको साटो प्रणाली बसालेर त्यसले काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । जुन, उनले गरेको देखिएन ।
हैकमवाद : घिसिङ आफू खटिए, लादिए, कर्मचारीमा एक प्रकारको त्रास उत्पन्न गराए । धम्क्याए र हैकम जमाए । पछिल्ला गतिविधि विश्लेषण गर्दा विगत ४ वर्षमा थिति वा विधिले भन्दा डर, त्रास र हैकमले काम गरेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग देखियो । नत्र, घिसिङ बाहिरिने वित्तिकै चार वर्षसम्म एक भएका उच्च कर्मचारीहरू छिन्नभिन्न हुँदैनथे ।
चार वर्षसम्म हरेक तरहले प्राधिकरणको हित सोच्ने र त्यही अनुसार काम गर्ने कर्मचारीहरूले घिसिङको बहिर्गमन लगत्तै ‘यो विषयमा मलाई थाहा छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदैनथे । प्राधिकरणका हरेक कर्मचारीले सर्वसाधारणले तिरेको विद्युत् महसुल वा करबाट तलब–भत्ता बुझिरहेका छन् । जनताको पसिना चुस्नेहरू यसरी गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ ?
प्राधिकरणकै एक उच्च अधिकारीले सधैं पूर्वकार्यकारी निर्देशक अजितनारायण सिंह थापाको कुरा गरिरहन्छन् । उनी भन्छन्– त्यतिबेला प्राधिकरण सिस्टममा चलेको थियो । कर्मचारीहरू अहोरात्र खटिन्थे । तर, कार्यकारी निर्देशक कार्यालय वा वैदेशिक बैठकबाहेक पत्रिका पढेर बस्थे ।
हुन त, त्यतिबेलाको प्राधिकरण र आज आकाश जमिन फरक छ । त्यही उदाहरण आज मेल खान्छ र खानुपर्छ भन्ने होइन । त्यसो भन्नु मुर्खता पनि हुन्छ । यसको अर्थ हो, संस्थामा सिस्टम बस्नुपर्छ र सिस्टमले काम गर्नुपर्छ । कुनै संस्थामा प्रमुख हाकिम बाहिरिए वा केही समय पद रिक्त रहे पनि सिस्टमले काम गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि संस्थामा एउटा कर्मचारी वा हाकिम बाहिरिने वित्तिकै लथालिंग हुनु पक्कै सुधारको संकेत होइन । नेपाल टेलिकम पनि सरकारी संस्था हो । यहाँ पनि राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ । तर, हाकिम फेरिनासाथ भाडभैलो हुँदैन । टेलिकमले करोडौं जनतालाई सेवा पुर्याउँछ । त्यहाँ थिति र विधि छ । त्यही अनुसार काम हुन्छ ।
प्राधिकरण त्यो भन्दा भिन्न संस्था होइन । यहाँ पनि थिति बस्नुपर्थ्याे । दशकौंसम्म बस्न सकेन । अझ ३ करोड जनताले रुचाइएका र पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने भन्दै माग गरिएका अनुहार ‘घिसिङ’ले समेत ‘सिस्टम’ बसाल्न नसक्नु ठूलो दुर्भाग्य हो ।
प्राधिकरणभित्र देखिएका पछिल्ला गतिविधिले के प्रस्ट हुन्छ भने, पहिलो घिसिङले ‘सिस्टम’ बसालेनन् वा ‘सिस्टम’मा काम गर्न सिकाएनन् । मात्र डर र हैकम चलाए । दोस्रो, कर्मचारीहरू सिस्टममा काम गर्न चाहँदैनन् वा गर्दैनन् । तेस्रो, कर्मचारीहरू हैकम वा डर वा डण्डा देखाएको भरमा मात्र कााम गर्छन् । नत्र लत्तो छोड्छन् ।
यदि, यसो हो भने प्राधिकरणमा सधैंभरि डण्डा वा हैकममा काम गराउने व्यक्ति आउनुपर्यो । लादी निस्कने गरी दलाउने हाकिम हुनुपर्यो या सिस्टम बसाल्ने । सरकार तथा प्राधिकरण कर्मचारीले समेत संस्थाको हित सोच्ने हो भने थिति बसाल्ने व्यक्ति ल्याउनुपर्यो । जबसम्म हैकमवादले काम गरिरहन्छ तबसम्म कर्मचारी कुस्तुर हुन्छन् । ऊ बाहिरिएपछि फेरि लत्तो छोड्छन् । हैकमवादी व्यक्ति संस्थामा कहिल्यै ‘सिस्टम’ बसाउन तयार हुँदैन ।